हुम्लाका कृषकको मुख्य आम्दानीको स्रोत तरकारी भएपनि बजार भाउ छैन् ! – Yuwa Aawaj
हुम्लाका कृषकको मुख्य आम्दानीको स्रोत तरकारी भएपनि बजार भाउ छैन् !
चैत्र १, २०७७ आइतबार 269
हुम्ला : हुम्लाका कृषकको मुख्य आम्दानीको स्रोत तरकारी
सिमकोट, हिमाली जिल्ला हुम्लाका अधि’कांश कृषकको मुख्य आम्दानीको स्रो’त तरकारी बनेको छ ।
जिल्लामा बेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि अधिकांश कृषक तरकारी खेती गर्नतर्फ आकर्षित भएका छन् । हिउँदयाममा बेमौसमी खेती गरेर तरकारी उत्पादन गरी कृषकले बि’क्री गर्दै आम्दानीको मुख्य स्रो’त बनाएका छन् ।
यस समयमा सिमकोट गाउँपालिका–४ हेल्दुङगाउँका ३० घरधुरी बेमौसमी तरकारीबाट मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएको कृषक गगन शाहीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिउँदयाममा घरमा त्यत्तिकै बस्नुभन्दा समयको सदुपयोग हुने र
बालबालिकाका लागि कापी, कलमदेखि घरपरिवारलाई खाद्यान्नको पनि जोहो गर्न सजिलो हुने भएपछि यस पेशालाई सौभाग्यका रूपमा लिइएको छ ।” हिउँदको समयमा बेमौसमी तरकारी बोकेर सदरमुकाम सिमकोट पु¥याउँदा एक मुठा
सागको रु ३० र धनियाँ रु २० मा बिक्री गर्ने गरेको कृषक शाहीले बताउनुभयो । आफूले आफ्नो घरमा बेमौसमी तरकारीका लागि ग्रिनहाउस हालेर बाक्लो तरकारी फलाउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसबाट महिनाको करिब रु सात हजारसम्म कमाउने गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सदरमुकाम सिमकोट आसपासका गाउँमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्दा आम्दानीको राम्रो स्रोत बने पनि सदरमुकाम बाहिरका अधिकांश गाउँपालिकाका कृषकलाई भने उत्पादन गरेको तरकारी बिक्रीका लागि बजार नपाउँदा समस्या भएको बताइएको छ । रारस
Prevनेपाली खाना विश्वभर चिनाएकोमा सन्तोष साहलाई बेलायती राजदूतले पनि दिईन बधाई !‌
Nextफुटको संघारमा पुग्यो एमाले, गोतम, नेपाल र खनालको बनयो यस्तो समिकरण !